Israel Oo Goob Jooge Ka Noqotay Ururka Midawga Afrika Kaddib Geeridii Qaddafi Djibouti Iyo Soomaaliya Oo Debecsanaan U Muujiyay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Breaking News / DJibouti / Ethiopia / Magazine / Somalia / Somaliland / Sudan/ south Sudan Jubba / Warar / Wararka Somaliland | By admin
Washington, D.C. (ANN)- Ururka Midawga Afrka ee (AU), ayaa aqblay in Israel xubin goob jooge ah ka noqoto Midawga Afrika, taas oo qayb ka ah heeshiiska Abraham Agreement ee ay ku doonayso in ay xidhiidh kula samayso dalalka Afrika, si ay awood ugu yeelato mandaqada.
Saddex maalmood ka hor ayay hayd markii Midowga Afrika uu ku dhawaaqay inuu siin doono goobjooge Israel, taas oo ku beegnayd 22 July 2021. Markii uu soo baxay warkaasi wuxuu layaab ku noqday dad badan oo reer Israel ah, in kasta oo diblomaasiyiinta qaybta Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay si adag uga shaqaynayeen himilada ay ku doonayeen hirgelinta arrintaa, sideedii bilood ee la soo dhaafay. Rina Bassist oo ah suxufiyad u dhalatay Israel, ayaa sidaa ku sheegtay warbixin dheer oo lagu daabacay warbaahinta caalamiga ah ee Al-Monitor, taas oo xarunteedu tahay Washington, D.C. isla markaana leh shabakad ay ka hawlagaal in ka badan 160 qoraa iyo falanqeeyayaal adduunka oo dhan ku kula sugan.
“Ambassador, Aliza Bin Noun, oo ahayd safiirkii hore ee Hungary iyo France oo hadda madax ka ah qaybta Afrika, ayaa muujisay ku qanacsanaanta arrintaa. “Aad ayaan ugu faraxsanahay in Israel ay dib ugu soo laabato qaarada Afrika iyadoo noqonaysa goobjooge Midowga Afrika ah. Waxaan rajaynaynaa inaan dhisno iskaashi dhinacyo kala duwan ah, sida horumarinta dhaqaallaha, la dagaalanka argagixisada caalamiga ah, la dagaalanka cudurka faafa ee coronavirus, nidaamyada caafimaadka, beeraha casriga ah iyo waxyaabo kale oo badan. Tani waxay muujinaysaa in Israel ay taariikh ku leedahay Afrika, waxay leedahay ahmiyad, sidoo kale waxay leedahay mustaqbal weyn oo ka buuxa qaaradda, ”sidaa ayay u sheegtay Al-Monitor.
Shebekaddaha Araweelo News Network, ee mataanaha ah oo soo xiganaya Al-Monitor oo lagu daabacay warbixintaa, ayaa turjumay si ay ula wadaagaan akhiristayaashooda, waxaana lagu sheegay warbixinta in Israel waxay ku naaloonaysay inay goob joog ka ahaato Ururka Midnimada Afrika ilaa 2002, markii ururku kala diray, taasoo keentay inuu soo baxo Midowga Afrika. Cadaadis uu saaray kaligii taliyihii hore ee Liibiya Moammar al-Gadhafi, ururka cusub ee la aasaasay ayaa joojiyay meeqaamkii goob jooge ee Israel. Tan iyo markaas, Israel waxay isku dayday inay dib u soo ceshato, iyada oo dadaal diblomaasiyadeed iyo laba codsi oo rasmi ah u gudbisay Midawga Afrika, kuwaas oo laga qabtay 2014 iyo 2018. Ra’iisal wasaarihii hore Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Avigdor Liberman labaduba waxay muujiyeen dadaallada xilligan midha dhalay.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray mucaaradad xoog leh oo Israel ka dhex jirtay Midowga Afrika, inta badanna waxaa ka socday waddamada taageera qadiyadda Falastiin, sida Koonfur Afrika, Liibiya iyo Masar. Falastiin waxay heshay meeqaam goob jooge sanadkii 2013, Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa lagu casuumay inuu ahaado gudoomiyaha martida ee shirwaynaha ururka 2019, Markii ay ahayd guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika intii u dhexeysay 2012 ilaa 2017, siyaasiga Koonfur Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma waxay si kulul uga soo horjeesatay dadaallada isu soo dhowaanshaha Israel iyo ururka Midawga Afrika.
Tan iyo markii la aasaasay 1948, Israel waxaa si weyn loo maal galiyay saameynta xidhiidh ay la yeelato Afrika. Waxay si taxaddar leh u sii wadeen 1970-yadii, taas oo ka soo horjeeday aasaaskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973, markii dalal badan oo Afrikaan ah ay xidhiidhka u jareen Israel. Sanadihii la soo dhaafay, Israel waxay ka hirgalisay Afrika mashaariic fara badan waxayna kasbatay sumcadda mid ka mid ah waddamada adduunka ugu horumarsan ee dhinacyada farsamada, beeraha casriga ah, maaraynta biyaha iyo barashada masaafada, meelaha muhiimka u ah dhaqaalo badan oo Afrikaan ah. Sida lagu sheegay warbixinta.
Markii Israel ay la saxeexatay heshiiska (Abraham Agreement) ee lagu macbeeyay Is-afgaradkii Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Marooko Oktoobar 2020, arrimuhu waxay u muuqdeen ku bilaabmay inay is beddelaan wax badan. Suudaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay caadi ka dhigeyso xidhiidhka ay la leedahay Israel. Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu kaloo ahaa qodob soo dedejinaya, maadaama dalal badan ay u baahan yihiin caawimaad iyadoo ay jirto burburka dhaqaale, taas oo ay Israel ka faa’idaysatay, sida lagu xusay warbixinta.
AKHRI: Israel Oo Waraaqaha Aqoonisga Ka Guddoontay Safiirka Imaaraadka Carabta
Ilo wareedyo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa u sheegay Al-Monitor in Bin Noun uu u arkaayay isu soo dhawaanshaha Midowga Afrika ficil ahaan howl gaar ah. Wasiiraddii hore ee Arrimaha Dibada Gabi Ashkenazi iyo Wasiirka hada Yair Lapid ayaa si buuxda u taageeray iyada iyo qaybinteeda dadaalkan.
Wasiiradu waxay arinka kor ugu qaadeen xidhiidh kasta oo ay la yeeshaan dhigooda dal ka mid ah kuwa Afrika. Si loo sii sii wado arrimaha, Bin Noun wuxuu u duulay xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa April 2021. Waxay halkaas kula kulantay ilaa 30 danjire oo ka tirsan wadamada xubnaha ka ah Midawga Afrika. Ku xigeenkeeda ayaa bil kadib booqday Adis ababa. Kadib, subaxnimadii shalay, Safiirka Israel ee Ethiopia Aleleign Admasu ayaa taleefan ka helay xoghaynta AU, isagoo ku casuumay inuu u soo bandhigo waraaqihiisa aqoonsiga ee Israel si ay u noqoto goob jooge. Sida lagu sheegay warbixinta.
Ilaha diblumaasiyadeed waxay sharraxeen in Israel ay ku guuleysatay abuurista sawaxan iyo Buuq dhab ah oo ku saabsan arrinta. Iyada oo sanado badan ay ka shaqaynaysay mashaariic iskaashi, farsamadeeda aqoonta iyo sida loo xaqiijiyay rabitaankeeda ku lug lahaanshaha mashaariicda horumarinta, waxay noqotay wax dabiici ah in Israel la aqbali doono. Taageerada Felix Tshisekedi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo haddana ah madaxweynaha Midowga Afrika, runti waxay ahayd mid muhiim ah, sida taageerada guddoomiyaha hadda ee AU, Moussa Faki oo reer Chad ah.
Ilaha diblomaasiyadeed waxay carabka ku adkeeyeen in mid ka mid ah saamaynta ugu muhiimsan ee suurtagalka ah ee tallaabadani ay tahay diblomaasiyadda Dalalka sida Djibouti, Mali, Niger iyo xitaa Soomaaliya, oo dhammaantood ka caga jiidaya inay caadi ka dhigaan xidhiidhka ay la leeyihiin Israel, kaas hadda iman kara.
Haim Koren, oo muxaadarooyin ka jeediya Xarunta Dhaqanka ee Herzliya, ayaa ogolaaday. Koren wuxuu soo noqday safiirka Israel ee Masar iyo safiirkii ugu horeeyay ee Israel ee Koonfurta Suudaan. Sidan oo kale, wuxuu si dhow ugu lug lahaa dadaaladii Qudus sanadihii la soo dhaafay si uu ugu biiro Midowga Afrika, isagoo ah goob goobjooge. Markii horeba markii aan ka shaqeynayay Koonfurta Suudaan, waxaa naloo xilsaaray howlgalka inaan horumarinno tan, laakiin ma ahayn wax fudud, oo ay diidan yihiin dalal taageersan Falastiin. Balse Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia ayaa isku dayay inay na caawiyaan, laakiin Mrs. Dlamini-Zuma waxay u dhago nuglaatay cadaadiska Falastiin, ”sidaa ayuu u sheegay Al-Monitor.
Koren wuxuu ku qiyaasayaa in horumarkan cusub aannu keliya dhalaalin karin xiriirka kala dhexeeya waddamada Israel uusan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn. Waxay sidoo kale sare u qaadi kartaa sumcadda Israel ee ah dal dhisi kara iskaashiyo isaga gudba qaaraddaha iyo waddan u noqon kara dhexdhexaadiye xallinta khilaafaadka. Waxa uu xusay in Israel ay casuuntay hal mar Urur Goboleedka IGAD ee Horumarinta si ay u dhexdhexaadiso “khilaaf Afrikaan ah oo gaar ah,” isagoo ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. Xaaladda cusub ee Israel waxay bixin kartaa fursado badan oo noocaas ah.
“Way adag tahay in si dhab ah loo ogaado dhaq-dhaqaaqa horseeda go’aanka. Laakiin si cad, xaqiiqda ah in Masar aanay diidin waxay ahayd qayb weyn oo tan ka mid ah. Qudus waxay ka faa’iideysatay furitaan, fursad, xilligii cilaaqaadka aan la leenahay Qaahira uu yahay mid xoog badan oo xitaa xidhiidh dhow leh, iyo marka aan ku raaxeysanno firfircoonaan wanaagsan oo aan la leenahay Suudaan, “ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray,” dhammaan kor u kaca iyo hoos u dhaca Israel ee xidhiidhka Afrika waa soo maray, tani dhab ahaan waa horumar aad u wanaagsan. “ayuu yidhi.